Ukudibanisa ngokuchanekileyo iifonti ezahlukeneyo kuyilo lwegraphic? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Esinye sezixhobo ezibonelelwa ziinkqubo kuyilo lwegraphic yile iifonti ezahlukeneyoNangona kunjalo, indlela yokusebenzisa nganye nganye kunye nendlela yokuyidibanisa kunye nayo inokubonisa umceli mngeni wokwenyani kwingcali ukuba abayiphathi ngokufanelekileyo. wenza ntoni umsebenzi wefonti nganye kwaye zithini iimpawu zayo.
1 Bangaphi oomatshini bokuchwetheza abaya kufaneleka kwimisebenzi yoyilo lwegraphic?
2 Uyikhetha njani ifonti enobuntu
3 Ezi ziya kuba zezinye iindlela ezinokukunceda ukhethe ifonti yesibini:
3.1 Ubhejo olukhuselekileyo
3.2 Ungawuthelekisa njani umxholo
3.3 Ungazifezekisa njani izitayile ezingafaniyo kwindawo yochwethezo
Bangaphi oomatshini bokuchwetheza abaya kufaneleka kwimisebenzi yoyilo lwegraphic?
Njengomgaqo, ngaphezulu kwesithathu sochwetheza kuya kuba ngaphezulu kwaye ubeka emngciphekweni wokuphulukana nomxholo womyalezo.
Ngokomzekelo, ilogo isebenzisa phakathi kwe-1 kunye ne-2 iifonti ezahlukeneyoInye yile ifuna ukuqaqambisa izihloko, onokuziphumeza ngotshintsho lombala okanye ugxininise ngesibindi kunye nomnye ukwahlula amanye amagama. Into ebalulekileyo ekufuneka uyiqaphele kukuba iifonti ezimbalwa ozisebenzisayo zingcono, kodwa koku kongezwa ezinye izinto esiza kuzaphula apha.
Xa usenza i- umsebenzi woyiloEyona ndlela isebenzayo yokukhetha ifonti efanelekileyo kukugxininisa ekufundeni kwayo.Kule nto, indawo esinayo, inani lamagama, ukujonga umsebenzi, njl. Ngale ndlela iyakucaca ngakumbi ukuba ngokubonakalayo ukuba ngaba lo mthombo ubonisiwe.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba amaxesha amaninzi umyili unokuzifumana ejongene nemfuno yomthengi osele emisele uhlobo lwefonti, ubungakanani bomyalezo kunye nezinye izithintelo, phambi kwayo akukho kuninzi kunokwenziwa, ngaphezulu kweengcebiso ezithile kwaye kwiimeko ezilungileyo ezithi zithathelwe ingqalelo.
Uyikhetha njani ifonti enobuntu
Zimbini izinto ezibalulekileyo, ekufuneka uhambe ngazo kuqala khetha umthombo wokuqala, Njengokuba besesitshilo ngaphambili, kufuneka ibonakaliswe ngokufundeka kwayo, kwaye emva koko ukhethe ifonti yesibini kwaye kuthathelwe ingqalelo oku:
Qonda ukuba unobumba ngamnye uneempawu zawo eziwunika ubuntu, xa ukhetha ifonti yesibini kufuneka uqiniseke ukuba ikwanjalo ubuntu bokuqala Kwaye yeyiphi indlela ebhetele yokwenza ngaphandle kokukhetha enye ekwabelana ngeempawu zayo; Ngamafutshane, ukuba zombini iifonti zinempawu ezifanayo xa zidityanisiwe ziya kuphinda-phinda.
Kufuneka ithathelwe ingqalelo, kuba xa ubabukela bedibene, banikezela umyalezo ohambelanayo obonwayo, ubukhulu, imilo kunye nezinto zokubala kwezi kufuneka zifane.
Ezi ziya kuba zezinye iindlela ezinokukunceda ukhethe ifonti yesibini:
Beka oonobumba aba yenzelwe izinto ezithile ezifanayo kwaye ezibonelela ngobuqili kodwa ulwahlulo olwaneleyo lokuboniswa, umzekelo, unokukhetha hlanganisa iMeta neMeta SerifNgokubhekisele kwiimilo zoonobumba, ezi zihlala zinjalo.
Ungawuthelekisa njani umxholo
El Ukusetyenziswa kokungafaniyo ebusweni bohlobo lohlobo Kubalulekile ukuba ukwazi ukuthelekisa into ethile, ke ngoko, ukuba ubuso beleta bonyuliwe ukuze umzimba wayo ubonakale, ukuthelekisa ubuso bekhusi elichaseneyo kufuneka kukhethwe, oko kukuthi, akufundeki.
Kufuneka usoloko ufuna ukuqaqambisa ubuso obuchaseneyo ebusweni bomzimba obukhethiweyo.
Ungazifezekisa njani izitayile ezingafaniyo kwindawo yochwethezo
Apha kubaluleke kakhulu yazi indlela yokuchonga uphawu ukuba ithathwa njengeyona ibalaseleyo kuhlobo lokuqala lwefonti ekhethiweyo, enyanisweni, besesikhe sayikhankanya ngaphambili, kodwa kuxhomekeka kwiimpawu ezininzi, uhlobo lwesibini loonobumba abelana ngolu phawu luphambili kufuneka lufunwe.
Oku kufuna Ubukhali obuthile kwicala loyiloNangona indawo eyoyikekayo ilawula, nangona kunjalo, nangokuqiniseka okupheleleyo, indibaniselwano yoqobo kunye neyothusayo iya kufikelelwa, enika umngeni kwi-intuition yomyili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Ukudibanisa ngokuchanekileyo iifonti ezahlukeneyo kuyilo lwegraphic?